ပလတ်စတစ်ကိုရေနံစိမ်းအဖြစ်ပြောင်းတဲ့ဒီသိပ္ပံပညာရှင် - Afrikhepri Fondation
စနေနေ့, မေလ 15, 2021
Iလွန်ခဲ့သောခြောက်နှစ်က၊ အမေရိကန်အသေးစားနှင့်အလတ်စားအသေးစားနှင့်အလတ်စား Agilyx အလွန်အရည်အသွေးကောင်းသည့်ရေနံစိမ်းဖြစ်စေရန်မည်သည့်ပလပ်စတစ်ကိုမဆိုပြုပြင်သည့်နည်းစနစ်ကို ဦး စွာစတင်ခဲ့သည်။ မြေဖို့ခြင်းများကိုရွှေအနက်ရောင်အနည်ထိုင်များအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည့်တီထွင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် အဆိုပါ Goodplanet ဖောင်ဒေးရှင်းမှ။
ဤနည်းပညာအသစ်သည်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်စက်ရုံများကိုယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်တည်ဆောက်နေသည်ဟုယုံကြည်ပြီးဖြစ်သည်။ လူ ၆၀ ပါ ၀ င်သည့်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏မြို့တော်ဖြစ်သောပြင်သစ်ရေနံကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သော Total နှင့်အမေရိကန်နံပါတ် ၁ ကိုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့သည်။ စွန့်ပစ်စီမံခန့်ခွဲမှု.
အရည်အသွေးအရထုတ်လုပ်သောရေနံစိမ်းသည်ကမ္ဘာအနှံ့မှရရှိသောဓာတ်ငွေ့များကိုမငြူစူနိုင်ပါ။ ကောင်းပါတယ် ဖြစ်စဉ်ကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြခဲ့သည် -“ ပထမ ဦး စွာကြေမွသွားသည်၊ ပလတ်စတစ်ကိုကြီးမားသော 'အရာတစ်ခု' ထဲသို့ထည့်ပြီးဓာတ်ငွေ့အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးရေနှင့်အအေးခံသည်။ ထို့နောက်ဆီကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့တက်ခြင်းဖြင့်ခွဲထုတ်သည်။ ၇၅% ကျော်သောအလေးချိန်သည်ဒြပ်စင်အဆီအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီးဆော်ဒီသို့မဟုတ်ရုရှားအနက်ရောင်ရွှေများကဲ့သို့သန့်စင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ ကြွင်းသောအရာများကိုဓာတ်ငွေ့နှင့်နောက်ဆုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်း (၁၀% အောက်) အဖြစ်ခွဲထားသည်။ "
Agilyx ၏ဒုတိယဥက္ကpresident္ဌ Jon Angin ကဤသို့ရှင်းပြသည် -
“ ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ် ၀ င်စားစရာကဒီနေ့ခေတ်ပြန်လည်အသုံးပြုတဲ့ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေမဟုတ်ပါ။ အခြားဘယ်သူမှမလိုချင်သောပလတ်စတစ်များနှင့်အများအားဖြင့်အမှိုက်ပုံထဲရောက်သွားတတ်သည်”
အကယ်၍ ၎င်းသည်ပြန်လည်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အမေရိကန်၏ရှေ့သို့တစ်လှမ်းသာလျှင်ဥရောပသည်အမေရိကန်သို့မဟုတ်ကနေဒါထက်မြေဖို့ရန်နေရာများနည်းပါးသည်။
SOURCE မှ: http://www.wedemain.fr/L-alchimiste-americain-qui-refait-de-l-or-noir-avec-du-plastique_a120.html
ဘယ်လိုလဲ၊ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုနောက်ပြန်ဆုတ်ခြင်းအားဖြင့်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေနံကအိတ်တွေလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ... ဆန့်ကျင်ဘက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ မှလွဲ။ ...
... ဒါကမွန်တီထွင်မှုပဲ Akinori Ito အိမ်မှ Blest ကော်ပိုရေးရှင်း ပလပ်စတစ် ၁ ကီလိုဂရမ်ကိုသန့်စင်သောနည်းဖြင့်ဆီ ၁ လီတာအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုလုံးဝတံဆိပ်ခတ်တည်နေရာအတွက်ပလပ်စတစ်အပူ။ အငွေ့များသည်ရှုပ်ထွေးသောပိုက်များနှင့်ရေခန်းများဖြင့်ပိတ်မိနေသည်။ ထိုအခါအငွေ့၏အအေးရှိပါတယ်။ အငွေ့ကိုရေနံစိမ်းအဖြစ်သို့ချုံ့စေသောအအေး။ ဤရေနံစိမ်းကိုမီးစက်များနှင့်အချို့မီးဖိုများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ နောက်ထပ်သန့်စင်မှုအဆင့်တစ်ခုသည်ရေနံစိမ်းကိုဓာတ်ဆီအဖြစ်သို့ပင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ပိုကောင်း! ၎င်း၏စနစ်သည်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး တည်းအတွက်သာမဟုတ်၊ တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
SOURCE မှ: http://www.humanosphere.info/2011/09/sa-machine-transforme-1kg-de-plastique-en-1-litre-de-petrole/